Tantara foronina momba ny heloka bevava 6 izay manantona anao | Bezzia
Maria vazquez | 10/06/2021 12:00 | ankehitriny
Tianao ve ny mamaky tantara momba ny heloka bevava? Raha ity karazana ity no tena mampiala voly anao indrindra dia raiso ireo lohateny zarainay aminao anio. Ireto tantara enina momba ny heloka bevava enina ireto dia vao tonga tany amin'ny fivarotam-boky na ho avy tsy ho ela, anontanio ny momba azy ireo! Miorina amin'ny enclaves tena hafa izy ireo, mampanantena fihenan-dàlana, fihetsika hafahafa, fihenjanana ...
1 Ny fiainana miafina an'i Úrsula Bas
2 Amin'ny sasakalin'ny alina
3 Fianakaviana ara-dalàna
5 Vono olona tonga lafatra valo
6 Ho an'ny azy manokana
Ny fiainana miafina an'i Úrsula Bas
Mpanoratra: Arantza Portabales
Úrsula Bas, mpanoratra mahomby, mitarika fiainana toa manjavozavo ao Santiago de Compostela. Nandao ny tranony izy ny zoma iray volana febroary mba hanao lahateny amin'ny famakiam-boky ary tsy hiverina. Lois Castro vadiny dia nanameloka ny fanjavonany taorian'ny ora efatra amby roapolo. Úrsula, izay mijanona ao anaty lakalyFantany tsara ilay naka an-keriny azy - mpankafy manana tambajotra navelany nofonosana nefa tsy nanohitra kely akory - ary fantany fa hovonoiny izy na ho ela na ho haingana.
Ny inspektera Santi Abad, niditra tao amin'ny polisy taorian'ny herintaona sy tapaky ny fialan-tsasatra ara-tsaina, ary ny sakaizany Ana Barroso, izay vao notendrena ho mpanara-maso lefitra, dia nanomboka ny fikarohana tsy nisy hatak'andro niaraka tamin'ny fanampian'ny kaomisera vaovao, Álex Veiga. Ny dianao rehetra dia mitondra anao mankany tranga iray hafa tsy voavaha: ny an'i Catalina Fiz, nanjavona tany Pontevedra telo taona talohan'izay, ary tamin'ny mpamono olona iray izay toa nandray an-tànana ny lalàna.
Amin'ny sasakalin'ny alina
Mpanonta: Fanontana B
Afaka manamarika ny ho avin'ny olona niaina izany ve ny indray alina? Roapolo taona mahery izay no lasa hatramin'ny nilalaovan'ny kintana rock nihena Diego Letamendia tao amin'ny tanàna nahaterahany Illumbe. Io no alina nifaranan'ny tariny sy ny vondrona namany, ary koa ny an'ny fanjavonan'i Lorea, sakaizany. Tsy nahavita nanazava mihitsy ny zava-nitranga tamin'ilay zazavavy, izay hita fa nihazakazaka nivoaka ny efitrano fampisehoana, ny polisy, toa ny nandositra zavatra na olona hafa. Taorian'izany dia nanomboka asa aman-drery irery i Diego ary tsy niverina tany an-tanàna intsony.
Rehefa maty tao anaty afo hafahafa ny iray tamin'ireo mpikambana tao amin'ny gang dia nanapa-kevitra ny hiverina any Illumbe i Diego. Efa lasa ny taona maro ary sarotra ny fihaonana indray amin'ireo namana taloha: tsy misy amin'izy ireo na iza na iza tamin'izy ireo. Raha, mitombo ny ahiahy fa tsy kisendrasendra ny afo. Azo atao ve ny mifamatotra ny zava-drehetra ary, ela be taty aoriana dia afaka mahita famantarana vaovao momba ny zava-nitranga tamin'i Lorea i Diego?
Adam sy Ulrika, mpivady ara-dalàna, dia mipetraka miaraka amin'i Stella zanany vavy valo ambin'ny folo taona any amin'ny faritra mahafinaritra eo an-tsisin'i Lund. Raha ny fisehoana ivelany dia lavorary ny fiainany ... mandra-pahatongan'ny andro iray dia averina am-paka ity fotona ity Nosamborina i Stella satria namono olona tamin'ny fomba feno habibiana efa ho dimy ambin'ny folo taona zokiny noho izy. Ny rainy, pasiteran'ny fiangonana soedoà iray hajaina, ary ny reniny, mpisolovava mpiaro ny heloka bevava fanta-daza, dia tsy maintsy mieritreritra ny fomba amam-panao ara-etika rehefa miaro azy izy ireo ary manandrana mahatakatra ny antony maha-izy azy no ahiana voalohany amin'ny asa ratsy. Hatraiza ny halehiben'izy ireo hiarovana ny zanany vavy? Tena fantatrao ve ny atao hoe? Ary vao mainka mampanahy: mifankahalala ve izy ireo?
Mpanonta: Fanontana Gatopardo
Kalmann Óðinnsson no mponina tany Raufarhöfn tany am-boalohany, tanàna fanjonoana kely iray izay eo amin'ny sisin-tanin'i Islandy tsy azo ihodivirana Efatra amby telopolo taona izy, autiste, ary na dia hitan'ny mpifanolobodirindrina aminy ho adala ao an-tanàna aza izy dia mpiambina voatokana ho an'ny fiarahamonina. Voafehy daholo izany. Nandany ny androny nitety ny lemaka midadasika manodidina ny tanàna semi-efitra i Kalmann, nihaza amboahaolo amboara niaraka tamin'ny basy Mauser tsy azo sarahina, ary nanjono ireo antsantsa Greenland tao amin'ny Ranomasina Arktika mangatsiaka. Saingy, indraindray, ny maherifontsika dia mampita ny tariby ary lasa loza ho an'ny tenany izy ary, angamba, ho an'ny hafa ...
Indray andro, nahita sombin-dra tao anaty lanezy i Kalmann, nifanindry tamin'ilay fanjavonana mampiahiahy an'i Robert McKenzie, lehilahy manankarena indrindra ao Raufarhöfn. Kalmann dia saika ho resin'ny toe-javatra, saingy noho ny fahendreny tsy manam-paharoa, ny fahadiovan'ny fony ary ny herim-pony, dia hasehony fa, araka ny nolazain'ny raibeny azy, IQ dia tsy ny zava-drehetra amin'ity fiainana ity Voafehy daholo izany…
Vono olona tonga lafatra valo
Dimy ambin'ny folo taona lasa izay, ilay mpankafy ilay zava-miafina Malcolm Kershaw dia namoaka tao amin'ny bilaogin'ny fivarotam-boky izay niasany tamin'izany fotoana izany lisitra iray - izay zara raha nahazo fitsidihana na fanehoan-kevitra - izay heveriny fa izy ireo heloka bevava amin'ny literatiora be indrindra teo amin'ny tantara. Nomeny lohateny hoe Famonoan'olona Valo Lavorary ary nampidiriny kilasika tamin'ny anarana marobe amin'ny karazana mainty: Agatha Christie, James M. Kain, Patricia Highsmith ...
Izany no antony nahatratrarana an'i Kershaw, izay mananotena ankehitriny ary mpiara-miasa amin'ny fivarotam-boky kely tsy miankina iray any Boston, raha vao nandondona ny varavarany ny masoivohon'ny FBI tamin'ny andro fatratra tamin'ny volana febroary, nitady vaovao momba ny andiana famonoana olona tsy voavaha izay mifanalavitra eo . ireo nofidiny tao anatin'io lisitra taloha io ...
Ho an'ny azy manokana
Aogositra tolakandro mankaleo ilay mpivarotra fivarotam-panafody amin'ny tanàna kely Sisilianina dia mahazo anarana tsy fantatra anarana izay nandrahonan'izy ireo azy ho faty ary, na izany aza, tsy nomeny lanja izany. Saingy, andro vitsivitsy taty aoriana, novonoina teny an-tendrombohitra ilay mpivaro-panafody niaraka tamin'ny mpitsabo iray hafa manan-kaja, Roscio. Raha ny tsaho aparitaka dia miteraka fahasimbana tsy azo sitranina, ary nokapohan'ny polisy sy ny carabinieri ilay jamba, i Laurana ihany, mpampianatra sekoly ambaratonga lenta nefa kolontsaina, no manaraka ny mety hitarika ilay mpamono olona. Hitany fa ilay tsy fantatra anarana dia namboarina tamin'ny teny notapahina tao amin'ny gazety katolika mpandala ny nentin-drazana, L'Osservatore Romano, satria ny sary famantarana azy, Unicuique suum - "To each, his manokana" - dia hita ao ambadiky ny tapa-kazo. Ary manipy ny ain'ny mpiara-monina aminy izy.
Iza amin'ireto tantara momba ny heloka bevava ireto no tena mahasarika anao? Efa novakianao ve ny iray tamin'ireo mpanoratra tantara an-tsary momba ny heloka bevava teo aloha? Zarao aminay ny tantara momba ny heloka bevava izay nankafizinao tato ho ato.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » ankehitriny » Tantara momba ny heloka bevava 6 izay mampifandray anao